FAALLO :Guusha Muuse Biixi, Dareenkii Xaglotoosiye+ Xaglintii Madaxweyne Siilaanyo iyo Su’aalaha Bulshadu Is Waydiinayso. |
FAALLO :Guusha Muuse Biixi, Dareenkii Xaglotoosiye+ Xaglintii Madaxweyne Siilaanyo iyo Su’aalaha Bulshadu Is Waydiinayso.
Muddo badan oo bulshada Somaliland ku foognayd oo falanqaynaysay loolanka ka dhex socday xisbi xaakimka Kulmiye, oo hogaankiisa lagu hirdamayay, waxaa ayaamihiisii u dambeeyay la hadal hayay in tartan adagi dhex mari doono madaxweyne xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici iyo wasiir Saleebaan Ciise Axmed Xaglotoosiye oo ku loolamayay jagada madaxweyne xigeenka Somaliland, maadaama aanay musharaxa madaxweynaha iyo guddoonka golaha dhexe aanay cidi la tartamayn kadib markii musharaxiinta isbahaystay meesha ka baxeen.
10-ka November-2015- waa xilliga la sugayay natiijada loolankii in badan la soo falanqaynayay. Shirka golaha dhexe oo wakhtigaasi ku muddaysnaa lana filayay inuu 07:30 ka furmo Hotel Maansoor wuxuu si rasmi ah u furmay abaaro 09:50 Subaxnimo xilliga Hargeysa.
Shirku xiiso badan ma lahayn intii ay socotay xaadirinta xubnaha golaha dhexe oo qiyaas ku beegan ilaa 30 qof oo magacyadooda la yeedhiyay goobta ka maqnaayeen, inkasta oo Muuse Biixi goobta ka sheegay in 8 qof oo kali ahi maqan yihiin. Sidoo kale xamaasad ma lahayn shirku intii lagu jiray doorashada shirguddoonkii wakhtigu ka dhammaaday ee golaha dhexe oo dib kalsoonida loo siiyay iyo Muuse Biixi oo musharaxa xisbiga loogu cumaamaday si aan tartan lahayn.
Markii arrintu soo gaadhay tartanka Cabdiraxmaan Saylici iyo Wasiir Saleebaan Xaglotoosiye oo ku loolamayay jagada madaxweyne xigeenka ayaa arrintu isbedeshay oo muranno ku salaysan habka codaynta iyo kala tirintu abuurmay, waxaana lagu gunaanaday in kaadhadhka laga ururiyo golaha dhexe si loo ogaado qof walba cidda uu u codaynayo ergay walbana hal mar u codeeyo. Labada musharax ba culays badan ayaa ka muuqday, waxaana la filayay inay isku dhawaan doonaan tirada codadka ay kala helaan, haseyeeshee si sahlan ayuu ugu guulaystay Madaxweyne xigeen Saylici oo helay cod dhan 230 cod oo ka mid ah 365 goobta fadhiday halka Saleebaan Xaglotoosiye helay 114 cod.
Markay Muuqatay in Madaxweyne xigeenku ku guulaystay tiraddii codadka la tiriyay ayuu Xaglotoosiye ka soo booday Kursiga, kadibna gacan qaaday musharaxa la tartamay iyo madaxweynaha, wuxuuna isku dayay inuu shirka iskaga baxo, iyadoo cadho la dheehanayay, balse waa lagu nageeyay kulanka intii codadkiisa la tirinayay kadibna makarofoonka ayaa lagu soo dhaweeyay.
Markii Wasiir Saleebaan Makarafoonka qabsaday waxaa intii shirka fadhiday gaar ahaana Kulmiye iyo xukumaddiisa soo food saaray walwal ah inuu ku dhawaaqo hadal ka dhan ah hanaanka doorashada, rag badan oo soo barbar istaagayna waxay ka ahbinayeen inaanu ku tiigaalin hadalka, iyadoo la maqlayay isagoo makarafoonka kor ugu leh “ waar hadalka ii daaya.”
Xaglotoosiye kuma tiigaalin hadalka balse wuxuu madaxweynaha oo hor fadhiyay ku yidhi “ waxaan kugu boorinayaa inaad wax ka qabato khaladaad badan oo ku jira hanaanka doorashada ee xisbiga(habka la iskugu codeeyo ama la isku doorto).” Wuxuu intaasi ku daray hadal miisaan culus oo ah “ Guul darradu mar bay guusha tahay,” waa hadal bulshadu xoog u hadal haysay loona macnayn karo inuu ololihii uu ku jiray iyo habka looga guulaystay wax ka bartay, balse aanu jeclaysan inuu goobta ka sheego.
Waxaa sidoo kale dad badan hadalkiisa u macneeyeen inuu ula jeedo dhalliisha habka la isku doorto ee xisbiga, inuu arkay hannaan qabyaaladeed oo la iskugu eexanayo, ama lacago la isku duufsanayo oo codka lagu kala helayo.
Marka la eego bulshada dhexdeeda iyo faallooyinkooda baraha bulshada waxaa laga dheehan karayay taageero bulshadu u haysay inuu soo baxo wasiir Xaglotoosiye oo loo arko nin saamayn ku dhex yeeshay Somaliland, soona jiidi kara bulshada gobolada bariga Somaliland.
Tallaabadii Madaxweyne Siilaanyo qaaday
Waxaa sidoo kale indhaha bulshada soo jiitay Madaxweyne Siilaanyo oo u kala eexday labadii Musharax ee midna madaxweyne xigeenkiisa ahaa midna wasiirkiisa caafimaadka. Wuxuu u codeeyay Cabdiraxmaan Saylici, taasna waxay dad badani u fahmeen inay tahay farriin tilmaamaysa in madaxweynuhu golihiisa wasiirada, beeshiisa iyo inta kale ee talo ka qaadata ku dardaaray inay Madaxweyne xigeenka u codeeyaan, sidii uu horeba ugu dardaaray in Muuse Biixi loo codeeyo.
Madaxweyne Siilaanyo iyo inta talada la gorfaysa ayaa la sheegay inay is tuseen in haddii Wasiir Saleebaan Ciise Axmed Xaglotoosiye ku soo baxo kursiga madaxweyne xigeenka Kulmiye xisbigu dhici doono, maadaama laga cabsi qabo in gobollada bari doorasho ka dhici waydo, xisbiguna lumin doono kalsoonidiisa Awdal iyo sidoo kale inaan Wasiir Xaglotoosiye lagu aaminayn kursiga madaxweyne xigeen, cabsi laga qabo inuu ka laabto mabda’a Somaliland.
Su’aalaha bulshadu is waydiinayso
Dad badan ayaa is waydiinaya haddii Kulmiye waayay xubno miisaan culus ku lahaa xisbiga, xilal xukumaddeed iyo xisbina ka soo qabtay mustaqbalkiisu muxuu noqon doonaa? Su’aashaasi ayaan laga bixin karrin saadaalin dhab ah, maadaama siyaasadda Somaliland isbed-bedesho, sidoo kalena ay ku xidhan tahay cidda majaraha musharaxa madaxweyne iyo kuxigeen u qaban doonta Xisbiyada Waddani iyo Ucid oo la filayo inay qaabkooda wax ka bedeleen islamarkaana ku xisaabtamaan xubnaha cusub ee Kulmiye hogaanka u qabtay.
Sidoo kale waxaa su’aalo la iska waydiinayaa xubnaha ay ka midka yihiin Baashe Maxamed Faarax guddoomiye xigeenka koowaad ee Wakiillada, kuxigeenka labaad ee wakiillada Dr Cali Aw Yuusuf,guddoomiye xigeenkii labaad ee Kulmiye xildhibaan Waabeeye, kuxigeenka saddexaad xildhibaan Cabdiraxmaan Talyanle iyo siyaasiyiintii xukumadda iska casilay iyo taageerayaashoodu halka ay u digarogan doonaan, maadaama ay Kulmiye quus ka joogaan. Xubnahan ayaa leh miisaan culus maadaama ay iskugu jiraan hogaankii Kulmiye, hogaankii wakiillada iyo masuuliyiin xilalka soo qabtay xukumadda oo si fiican u garanaya farta xukumadda iyo xisbiga iyo siyaasaddaha ay isticmaalaan iyo waliba xogta xisbiga iyo xukumaddaba, balse iyana waa mid la eegi doono halka ay u biyo shubtaan maadaama aan illaa hadda la saadaalin karrin.
Sida uu horey u yidhi Mujaahid Cali Guray “ Dhammaadka khilaafka Kulmiye waa bilawga khilaafka Ucid” dad badan ayaa saadaalinaya in Musharaxnimada Muuse Biixi ee Kulmiye saamayn doonto musharaxa xisbiga Ucid Jamaal Cali Xuseen, maadaama ay yihiin laba musharax oo isku hayb ah. Wuxuu xisbiga Ucid ka warwarsan yahay siduu cod uga heli karo bulshada Muuse Biixi ka soo jeedo, taasina waxay keeni kartaa in la isla eego musharaxnimada Jamaal, balse muran ka dhashay si degdeg ah ayay masuuliyiinta Ucid dhawaan sheegeen in looga heshiiyay.